Milkiilayaasha Mootooyinka Nooca Fekon oo Cabsi la soo derestay. – Balcad.com Teyteyleey
Waxaa maalmihii dambe la maqlaayay in Mootooyinka nooca loo yaqaan Fekon la qabqabanaayay, iyadoo ciidamada Dowladda ay arrintaasi ku sheegeen in mootooyinkaan ay yihiin kuwo lagu fulin karo qorshayaal argagixiso.
Mootadaan ayaa ah nooc xitaa aysan soo qaban karin If you are searching for cost efficient Extra Super viagra offers, you’ve found the right place! Get your Extra Super viagra here for 4 USD! Gawaarida Ciidamada noocooda dheereeya ee loo yaqaan Cabdi Bilaha, sidoo kale mootadaan ayaa mari karta wadooyin aysan gawaaridu adeegasan karin.
Dhanka kale Milkiilayaasha Mootooyinkaan ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ilaa dhowr boqol oo mootooyinkaan ah la qabtay bilihii la soo dhaafay, waxayn qaarkood milkiilayasha sheegeen inay haystaan sharciyada looga baahan yahay.